ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ကိုအရေးယူမှုနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီရွေးကောက်ပွဲအလားအလာ၊ အိုင်စီဂျေအသုံးစရိတ် သန်း ၆၈၀ ၊ ပြည်တော်ပြန်တွေနဲ့ ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းကောက်နုတ်ချက်
24 พ.ค. 2563 - 15:20 น.
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကို အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ အလုပ်နဲ့ထောင်နှစ် ၃၀ ချလိုက်တဲ့သတင်းက ထိပ်တန်းရောက် ခေါင်းကြီးသတင်းတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရအဆက်ဆက် အဂတိ လိုက်စားမှု ကိုအရေးယူတဲ့အထဲ အပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ ထောင်ဒဏ်အများဆုံး ချမှတ်တာဖြစ်သလို လာဘ်ပေးသတွေကိုပါ ထောင်ချခဲ့တာပါ။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းကို ဖမ်းဆီးတရားစွဲထားတာ တစ်နှစ် ကျော် အကြာမှာ အပြီးသတ်အမိန့်ချတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအမိန့်ချတဲ့အချိန်ဟာ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ လပိုင်း အလို နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
အစိုးရအဖွဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ ၂၀၁၉ နှစ်လယ်ပိုင်းအထိ အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရက ဝေဖန်မှုတွေ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
နောက်ပိုင်း အိုင်စီဂျေအရေး၊ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါအရေး တွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် ဖြေရှင်းမှုတွေကြောင့် လူထုထောက်ခံမှု ပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခါ အခု သူ့ပါတီဝင်ဟောင်း၊ သူကိုယ်တိုင်ခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်ကို အဂတိလိုက်စားလို့ ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့ အပြစ်ပေးအရေးယူ ခဲ့တဲ့အတွက် အစိုးရပုံရိပ်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ပိုမြင့်တက်လာသလို ရှိသွားတဲ့ ဒီဖြစ်စဉ် ကြောင့် အန်အယ်လ်ဒီ ဟာ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အခြေအနေ ကောင်းနိုင်တယ်လို့ ယူဆမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။
"အလားအလာကောင်းတစ်ခုလို့ ယေဘုယျအားဖြင့် သတ်မှတ်လို့ရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့နောက်မညီညွတ်မှုတွေရှိပါတယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လို ဖြစ်စဉ်လိုမျိုးတခြားသော တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်တွေမှာလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ အန်အယ်လ်ဒီအစိုးရအနေနဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်မှာ လျစ်လျူရှုခဲ့ပြီးတော့ တနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကိစ္စကိုတော့ တရားရုံးကိုလွတ်လပ်စွာ စီရင်ပိုင်ခွင့်ပေးတယ်ပေါ့။ ဒါကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ရေးမနိုင်ရေးထက် ဒီနိုင်ငံအနာဂတ်မှာ အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းရှင်းစေချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စလို ဖြစ်နေတဲ့ တခြားသော တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် အစိုးရတွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကိုလည်းပဲ အစိုးရအနေနဲ့ လျစ်လျူမရှုသင့်ဘူးလို့ မှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ်" လု့ိ ဒေါက်တာညိုညိုသင်းကပြောပါတယ်။
ကျပ်သန်း ၆၈၀ တစ်နည်းအားဖြင့် သိန်း ၆၈၀၀ ဖြစ်ပြီး ဒီဖြည့်စွက်ငွေကြေးဟာ အခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ကြိုတင်လျာ ထားအသုံးစရိတ်မှာမပါခဲ့ဘဲ အရေးပေါ် ပေါ်ပေါက်လာလို့ ရရှိထားတဲ့ ဝန်ကြီးဌာန အသုံးစရိတ်တွေထဲကနေ ယူသုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဒီဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းမှာပဲ အိုင်စီဂျေကိစ္စ ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်ရမယ့် အသုံးစရိတ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းတောင်းခံထားတာပါ။
အိုင်စီဂျေမှာ တရားရင်ဆိုင်ရာမှာ ပြင်ပပညာရှင် ရှေ့နေ သီးသန့်တရားသူကြီးနဲ့ ဘာသာပြန်တွေ ငှားရမ်းတာ၊ ဥပဒေအကြံပေး တွေခန့်တာ၊ အမှုကြားနာရင်ဆိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်တာ၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင် တွေဖွဲ့စည်းစေလွှတ်တာ၊ ဥပဒေအကြံဉာဏ် ရယူရေး၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတွေ ကျင်းပရေး စတဲ့ ကုန်ကျရန်ရှိတဲ့ အသုံးစရိတ်တွေအတွက် လိုငွေ ကျပ် သန်း ၆၈၀ကို ဖြည့်စွက် ခွင့်ပြု ငွေအဖြစ် တောင်းခံရတာဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုငွေတောင်းခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အိုင်စီဂျေကိစ္စ ဒီဇင်ဘာမှာ ပေါ်လာတဲ့အခါ ဝန်ကြီးဌာနက သူ့မှာရှိတဲ့ပုံမှန်အသုံးစရိတ်ထဲကနေ ထုတ်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီလိုထုတ်သုံးခဲ့တာကြောင့် ပုံမှန်သုံးရမယ့် လုပ်ငန်းတွေအတွက် သုံးစရာငွေကြေး တော့တဲ့အတွက် တောင်းခံတာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ ပြည်သူ့ငွေစာရင်း ပူးပေါင်းကော်မတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းက ရှင်းပြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အိုင်စီဂျေကို အမှုရင်ဆိုင်ဖို့ သွားရောက်ရတဲ့ ခရီးစရိတ်တွေအပါအဝင် ဝန်ကြီးဌာနက တခြားသော အလုပ် တာဝန်နဲ့ သွားရောက်ရတဲ့ ခရီးတွေ၊ သံအမတ်ကြီးတွေ နိုင်ငံပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တာတွေအပါအဝင် ခရီးစရိတ်တွေနဲ့ လေလံပစ္စည်းသယ်ယူစရိတ်အတွက် ကျပ်သန်းပေါင်း၃၅၀ ကျော်ကိုလည်း ဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုငွေတောင်း ခံထားတာတွေ့ရ ပါတယ်။
ြည်တော်ပြန်လာသူတွေကို အစိုးရက သီးသန့်ထားပြီး ပြင်ပထိတွေ့မှုမရှိအောင် ဆောင်ရွက်ထားလို့ ဒီလူတွေကဆီနေ နောက်ထပ်ကူးစက်မှုလှိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလို့ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေက ပြောကြားထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဒေါ်လဲ့လဲ့မော်ကိုအရေးယူမှုနဲ့ အန်အယ်လ်ဒီပါတီရွေးကောက်ပွဲအလားအလာ၊ အိုင်စီဂျေအသုံးစရိတ် သန်း ၆၈၀ ၊ ပြည်တော်ပြန်တွေနဲ့ ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်း တစ်ပတ်အတွင်း သတင်းကောက်နုတ်ချက်